Iningi ngokuvamile offseason ka bulimaza imigudu yokuphefumula kubantu uchayeke kakhulu ekuhlaseleni ezibangelwa amagciwane kanye ezithathelwanayo, izimpawu ukuvuvukala kule bronchi, uqhoqhoqho nasopharynx. Njengomthetho, leso sifo iqala babazi ephethwe umphimbo kanye abandayo kancane, kodwa ngemva kosuku noma ezimbili kukhona isifuba esomile kuyakhathaza, ingqondo ubuhlungu esifubeni. Yilokho waqala yisishiso phezulu ipheshana zokuphefumula, okwakubizwa ngokuthi i ukucinana kwemigudu yokuphefumula. Esebenzisa ekwelapheni ukucinana kwemigudu yokuphefumula zingahluka ngokuya ngomthombo kwamagciwane nezifo, kodwa omunye zihlala zinjalo - ukusetshenziswa kwezidakamizwa mucolytic, ezisiza ukusheshisa expectoration.
ukuphathwa Isikimu Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini
Kubalulekile nokukhumbula ukuthi ukwelapha lesi sifo - kuba futhi eside ngempela kudinga ukunakekelwa okukhethekile futhi inqubo ukubekezela. Nokho, ukuze sifeze wonke izincomo kanye kadokotela kuyadingeka, ngoba izinguquko sokugembula kungaba kasnutsya hhayi kuphela bronchi, kodwa futhi amaphaphu, nezitsha eseduze. Ngakho-ke, izindlela ukwelapha ukucinana kwemigudu yokuphefumula kukhona izincomo ezilandelayo:
Ukusetshenziswa bronchodilators ukunweba amashubhu bronchial ngokwabo futhi ukuvimbela okuvela kuyo bronchospasm.
Kuyadingeka yokwelapha ama-antibiotic noma, ngaphezulu nje, ukusetshenziswa kwemithi elwa namagciwane.
Mucolytics kumele isetshenziswe ukuthuthukisa umphumela expectorant.
Kuyadingeka ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uqale ukwelapha ukucinana kwemigudu yokuphefumula. Esebenzisa ekwelapheni ukucinana kwemigudu yokuphefumula, Yiqiniso, ukuba amise udokotela. Futhi uhlu enamathiselwe ka ezisetshenziswa kakhulu imithi yakhelwe kuphela ukujwayelaniswa.
Bronchodilators we imithi eminye esebenza ngempumelelo kakhulu eziye zatholwa "Eufillin" futhi "Erespal". Lesi sakamuva ingasetshenziswa ngisho nezinsana, ngoba siqukethe fenspiride (ejenti asebenzayo) kanye nekhambi izithasiselo uju kanye akhiphe licorice impande.
Ngu mucolytics zihlanganisa wonke amathuluzi ajwayelekile "Ambroxol", "Lasolvan", "Bromhexine" namanye amagama ahlobene nalo eziningi. Yiqiniso, ukuze usize ingane unqobe ukucinana kwemigudu yokuphefumula, ukwelashwa ukucinana kwemigudu yokuphefumula okumele asetshenziswe kuphela ngesimo kuvunyelwe, isb. E. Ngesimo kumasayiraphu.
Ukwelapha umuntu ngemithi elwa namagciwane ingase ethulwa imithi elwa namagciwane elwa namagciwane ezifana "amoxicillin" noma "Cefuroxime", futhi izingane - slurry "Amoksiklav".
Ngaphezu ukususa eziya ziba zimbi ukucinana kwemigudu yokuphefumula, ukwelashwa kufanele ihlanganiswe futhi zihlanganisa imithi herbal futhi ephefumula. Ukuze siqhube ephefumula kungcono ukusebenzisa idivayisi nebulizer ephephile, ikakhulukazi uma kuziwa ekunakekeleni ingane. Futhi ngalezi zinqubo, ungasebenzisa Imithi ekhethekile "Atrovent", "Flomax", "Berotek" "Ventolin", "Rotokan" noma zezinkambi engamakhambi nge zikagamthilini, sembabazane, Linden, sage, calendula, chamomile, wort iSt John sika.
Okhokho bethu ngempela selaphe ngempumelelo izifo eziningi namakhambi, iyathinteka kulolu hlu, futhi ukucinana kwemigudu yokuphefumula. Ukwelashelwa ukucinana kwemigudu yokuphefumula, alinikela imithi yendabuko, okuhloswe ngazo ukukhulisa inani phlegm kokukhwehlela okusheshayo ngakho ukuze kutholelwe ngokwanele futhi ingasetshenziswa ngisho nezingane. Njengoba isiphuzo efudumele Kunconywa zezinkambi engamakhambi kusukela licorice impande, Marshmallow, Elecampane, amahlamvu ivy, Thyme, marjoram, chamomile, lime, sage, umama nosingamama, futhi wort iSt John sika. Futhi zonke amakhambi ingasetshenziswa eyodwa ingxenye umhluzi, futhi edidayo.
Esikhundleni ukufudumala yokugcoba izincomo yesimanje ukuphakamisa bear lasendulo, Izimbila noma imbuzi amanoni ngisho ukusebenza lozakwabo zabo zamanje. Hlikihla isidingo emuva izinyawo nasesifubeni, ngaphandle inhliziyo zone.